Cajiibka wuxuu sharaxayaa faa'iidooyinka muhiimka ah ee maalgelinta SEO
Waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay Search Engine Optimization, aad taqaan waxawaxaa laga yaabaa in qof uu kugula taliyay in aad tixgeliso sida istaraatiijiyada suuq-geynta internetka. Shirkadaha SEO waxay leeyihiin awood ay ku dari karaan dhabtaqiimaha ganacsigaaga iyo ganacsatada ayaa horeyba u qaadanaya waxyeellada. Sida laga soo xigtay warbaahinta warbaahinta ee Borrell Associates, $ 65 bilyanayaa lagu kharash gareeyey SEO-ga iyo kharashka ayaa kor u qaadi doona $ 80 bilyan sannadka 2020.
Ka hor intaadan u shaqeyn shirkad SEO ah shirkaddaada, waa inaad qaadatid qaarwaqti si aad u fahamto waxa socdaalka ku jira. Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, Igor Gamanenko wuxuu siinayaa fikradda ah waxa doorka SEO-ga ee horumarinta ganacsigaaga - parchi di divertimento emilia romagna flag.
Cilmi-baarista Kelmadaha iyo Wax-ka-qabashada
Labadan habdhaqameedyadani waxay qeexayaan dadka dhagaystayaasha ah ee aad rabto inaad internetka hesho,markaa xiriirka mashiinka raadinta ayaa kuu oggolaanaya inaad la xiriirto iyaga. Iyadoo la adeegsanayo cilmi-baaris iyo keydinta, waxaad isticmaashaa qaas ahereyada muhiimka ah ee loo yaqaan "boots pods" ama "software pay". Marka dadku raadiyaan jumlado khaas ah, ganacsigaaga ayaa soo bandhigi doonaoo ka mid ah natiijooyinka ugu horreeya iyo haddii ay gujiyaan xidhiidhkaaga - waxaad heleysaa rajo cusub
Markaad kireysato shirkad SEO ah si aad uga shaqeyso goobtaada, macnaheedu waa inayka shaqee boggaaga si aad u oggolaato inay si fudud ula xiriiraan Google. Kadib marka Google uu kuugu soo galo goobtaada waxa ay si wanaagsan u qiimeyneysaa..
Ololaha Isku-xirnaanta Dhismayaasha
Backlinks ayaa aad uga qiimeeya Google. Haddii website-kaaga la xiriirooo leh boggaga kale ee muhiimka ah ee internetka, mashiinka raadinta ayaa qiimeyn doona boggaaga internetka ee natiijooyinka raadinta. Helitaanka isku xidhka noocaas ah ma fududa sababta oo ahwaa in lagu sameeyaa hab sharci ah iyadoo la adeegsanayo ereyo muhiim ah oo la xidhiidha ganacsigaaga.
Inaad wax ka qabato wax walba oo ay ku jiraan baaritaanka erayga ee muhiimka ah,soo-saarka muuqaalka, dhismaha isku-xirka iyo arrimaha farsamooyinka micnaheedu waa inaadan helin natiijooyinka aad rabto. Shaqada SEO wuxuu u baahan yahay shaqo joogta ah oo ballaaranXirfadaha kala duwan ee adiga ama shaqaalahagu aanay haysan. Shaqaalaynta shirkad SEO ah waa hab hubaal ah oo dab-demiska ah si loo xoojiyo geeddi-socodka ganacsigaaga iyo aad u sareeyaSoo Celintaada Maalgelinta - ROI
Marka aad shaqaaleysid khabiiro SEO ah, waxaad ka heleysaa aragti cusub oo ku saabsan meeshaistaraatiijiyada suuqgeynta ganacsigaagu waxay u baahan tahay in ay u wareegto si ay u hesho hogaamiyayaal cusub oo dheeraad ah.
Waxaad baran kartaa wax walba oo ku saabsan SEO oo aad bilaw ku bilowdo isticmaalka internetkailahaaga laakiin guulahaaga lama hubo maxaa yeelay SEO waa ganacsi jilicsan, eeloteric iyo ganacsi cusub. Waa in aad qorto khibradShirkad SEO ah oo leh rikoodh la xaqiijiyay oo lagu xaqiijinayo baahidaada SEO
Koox SEO ah oo khibrad leh waxay la timaadaa dhammaan noocyada qalabka software eecaadi ahaan kharash badan bay ku kacaysaa. Kooxdu waxay adeegsan doonaan qalabkan lagama maarmaanka ah si ay u noqoto mid ku guuleysiga SEO. Waa inaad tixgelisaa inaad kireysatoShirkad SEO ah haddii aad leedahay alaab ama adeeg oo diyaar u ah inuu tago heerka xigta. Sidaa daraadeed taasi waa tallaabada ugu muhiimsan haddii aad diyaar u tahay inaad aado weyn.